Jihaadka Dhabta Ah!!! – DHAGEYSO | Radio Muqdisho
Jihaadka Dhabta Ah!!! – DHAGEYSO
Published on October 10, 2012 by admin · No Comments · 3,509 views
Diinta Islaamka waxaa ku soo arooray Jihaad oo ay dadka muslimiinta ahi galaan marka ay ku soo gardarroodaan dad kale diinta ay rabaan ha heystaane. Jihaadku wuxuu leeyahay qeybo kala duwan. Si loo fuliyana wuxuu u baahan yahay in loo raaco waddadii ay diintu na fartay.
Kooxo kala duwan ayaa duniada Islaamka ka wada dagaallo ay ku macneeyeen Jihaad oo ay si joogto ah ugu daadiyaan dhiigga dad muslimiin ah iyo kuwo kale oo birima-geydo ah, Diintuna ay fartay inaan dhiiggooda iyo maalkooda la banneysan.
Waxaa kooxahaas ka mid ah Al-Shabaab oo Jihaad ku macneeyay xasuuq ay u adeegsatay Qaraxyo naf hallignimo iyo miinooyin lala eegtay goobo shacabku ku badan yahay. Waxaana ficillada Shabaab ay ku sheegeen inay Jihaad yihiin ka mid ah in ay Masaajidka ku sugaan dadka oo ay dilaan marka ay salaadda dhameeyaan.
Haddaba macnaha dhabta ah ee Jihaadka ee ayaan uga hadleynaa barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti ku yahay Sheekh C/llaahi Axmed Garuun oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
TUBTA TOOSAN 08 10 12